Samsung Launches Pre-Orders for S21, the details are not known yet. ﻿
Samsung Launches Pre-Orders for S21, the details are not known yet.
Samsung မှ S21 ဖုန်းအတွက် Pre-Order များကို စတင်လက်ခံလျှက်ရှိနေသော်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ ဖော်ပြသေးခြင်းမရှိ
SAMSUNG မှ လာမည့် Galaxy S21 စီးရီးဖုန်းများအတွက် ဓါတ်ပုံများကို ပရိသတ်များအတွက်ဖော်ပြပေးခြင်းမပြုလုပ်မှီမှာပင် ကြိုတင်မှာယူမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Pre-registration page တစ်ခုကို လွှင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ Galaxy S21 စီးရီးဖုန်းများရဲ့အသွင်အပြင်ကို ဘယ်အချိန်မှာမြင်တွေ့နိုင်မလဲဆိုတာကို သေချာမသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် SAMSUNG ရဲ့ hardcore fan များကတော့ သူတို့ရဲ့ official pre-registration page မှာ သူတို့ရဲ့နာမည်များကိုစာရင်းပေးထားခဲ့ပြီး အဆိုပါဖုန်းထွက်လာတာနဲ့ ပထမဆုံးကိုင်နိုင်အောင်လို့နေရာယူနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Galaxy S21 စီးရီးဖုန်းများ ဘယ်တော့ထွက်ရှိလာမလဲဆိုတာကို မသိရှိရသေးပေမယ့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကောလဟာလများအရ ယခုလအတွင်းတွင် အဆိုပါဖုန်းဟာ ထွက်ရှိလာနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါဖုန်းထွက်ရှိလာခဲ့ပါက နောက်ဆုံးပေါ် Snapdragon 888 နဲ့အတူ SAMSUNG ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Super AMOLED display တို့ဟာတော့ ပါဝင်လာနိုင်ချေရှိနေတာကိုတော့ သင့်အနေနဲ့မျှော်လင့်နိုင်ပါသေးတယ်။